Linux na-abawanye ọnụnọ ya na desktọọpụ site na 1% ruo 1.41% | Site na Linux
Linux na-abawanye ọnụnọ ya na desktọọpụ site na 1% ruo 1.41%
Perseus | | GNU / Linux, Noticias
Mgbe m na-agụ nri m taa, ahụrụ m ozi ọma a (nke na-atọ m ụtọ nke ukwuu n'ụtụtụ a: D), nke m sụgharịrị maka unu niile ...
Dị ka otu akụkọ si kwuo, ọnụnọ Linux na desktọọpụ anọwo na ịrị elu kemgbe oge okpomọkụ gara aga. Akụkọ nke NetMarketShare na-egosi na ojiji Linux na desktọọpụ mụbara site na oke nke 1% na Disemba 2010 ruo òkè nke 1.41% na Disemba 2011. Data sitere na NetMarketShare gosipụtara na tupu 2010 Linux na desktọọpụ na-adị gburugburu 1%. Ogologo a yiri ka ọ malitere na August 2011.
Banyere Microsoft Windows, ntụnyere dị n'etiti Disemba 2010 na Disemba 2011 na-egosi ntakịrị mbelata site na 93.78% ruo 92.23% na Mac OS X na mmụba dị nta site na 5.21% na 6.36%. Na ahịa ekwentị mkpanaaka, iOS ka na-ejide 52.10% nke ahịa ahụ, Java ME na-esote ya na 21.27% na gam akporo na 16.29%.
Nke a bụ eserese nke atụnyere ndị a:
Kedu ihe ị chere? Soro anyị k 'ile ihe anya maka ihe kpatara i jiri chee na ọnọdụ a bụ ihe ruru 😉
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Linux na-abawanye ọnụnọ ya na desktọọpụ site na 1% ruo 1.41%
Ihe 28 kwuru, hapụ nke gị
Ruo Ọktọba 2001, Linux kwụsiri ike n'etiti 0,87 na 1,19%
Ebe ka ha si enweta data a? Osx na-egbu m n'ihi na ọ bụ ezie na ọ na-ewu ewu na United States, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa. Onu ogugu nke iOS yikwara ka m na-enyo enyo, mana ọ ga-abụ n'ihi na mba m gam akporo gam akporo karịa.
Site na ihe m nwere ike ịchọta bụ ndị a:
Ihe data sitere na Ngwa Net, nke enwere ike nyochaa na ọrụ NetMarketShare ya, na-enye onu ogugu karia 40.000 weebụsaịtị, nke na-anọchite anya ihe ruru nde 160 nleta puru iche kwa ọnwa.
Kama nke ahụ, n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa ọ dịkwatụ ewu ewu.
Na Spain, m zutere naanị mmadụ abụọ na mac osx, iphone na aka nke ọzọ ebe niile, ọ bụ ya mere bulite ahụ na-enyo m enyo, mana hey.
Echere m na imeri desktọọpụ ka bụ utopia, Linux kwesịrị ịnwa ịchọ ịbụ "nhọrọ nke atọ" ahụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ekwesịrị ikwu na nkesa dị ka Linux Mint na Ubuntu na-eme ọtụtụ ihe iji gbasaa desktọọpụ. Ruo n'oge na-adịbeghị anya, ọ dịka ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche na ụfọdụ ndị ga-aba n'ime ịnwale Linux, mana ọ dị ka ọtụtụ egwu atụla ugbu a. Nke a bụ ozi ọma, n'enweghị obi abụọ ọ bụla.
Ọ bụghị maka "imeri oche" enyi Josemas; D
Zaghachi Lucas Matias
Eziokwu bụ na achọghị m ịma ma Linux ga-agbatị ma ọ bụ na ọ gbatịghị, wee yie ndị enyi anyị si Hasefroch ma ọ bụ ihe yiri nke a, ọ ka mma na ihe niile dị ka ọ dị
Na ihe m kwenyere: Ọ bụrụ na iji Linux anaghị anọchite anya ọdịiche, karịrị akụrụngwa ya na aha ya, kedụ ihe dị iche ọ na-eme mmadụ ole jiri ya? Ekwenyere m mgbe niile na iji Linux nwere ike ịpụta ọtụtụ ihe dị iche maka onye ọrụ ọ bụla, mana ihe bara uru bụ na ọ bụ ihe ọzọ, omume maara nke na-ajụ nkwenye na nkwenye, n'ụdị ya ọ bụla.
Wish chọọ ka ọtụtụ mmadụ gụọ Nietzsche, Kant, Rulfo, Sabato, Freud, Cortazar, Marx na Engels, de Beauvoir, Dostoevsky, Poe, Villoro, wdg. wdg, ọ bụghị ka ọ bụrụ ndị kacha ere ahịa, mana iji hụ ụwa n'ụzọ ọzọ.
Kwuola ya karịa onye ọ bụla enyi:
[…] Iji lee ụwa anya n'ụzọ dị iche […]
Naanị m ga - agbakwunye ma ọ bụ dokwuo anya na: ọ bụghị ịhụ ụwa n'ụzọ dị iche site n'echiche nke ahụmịhe, kama, site na ụzọ ndụ ka mma 😉
Nke a bụ ihe GNU / Linux bụ ihe, kedu n'ime anyị agbanwebeghị ndụ anyị maka "Tuxito" ka mma? 😀
Site n'ụzọ, daalụ nke ukwuu maka ịza ajụjụ 😉
Ọ dị egwu, mana ị ga-eburu n'uche gburugburu ahụ, na ndị enyi m na ndị enyi m, ahụrụ m ọtụtụ gam akporo karịa ekwentị Apple.
N’ezie, echeghị m otu ahụ. Mana m na-anụ na Linux kwesịrị iru desktọọpụ niile ebe m bidoro iji ya, laa azụ na 97 (lee ka mmiri zoro, hehe). N'oge ahụ, ndị ọrụ na-etinye Redhat 4.1, ekwuru na ọ "ga-eweghara ụwa" ma "hapụ Windows ka ọ maa jijiji." Aka m na-echeta mgbe m chịkọtara GNOME 0.2 iji nwee ike iji ya dị ka desktọọpụ 😉 Agbanyeghị, na-elele nkesa dị ka Linux Mint ọ pụtara na enwetala ọtụtụ ihe kemgbe ahụ, anyị enweghị ike ime mkpesa nke ukwuu.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ dị ka Linux erutela onye ọrụ ahụ, mana site na ọnụ ụzọ azụ na Android. Chọpụta, nke ahụ bụ Linux, mana obere GNU ...
Ya mere, n'oge ahụ m na-egwu egwu Mario bros ụbọchị niile 😀
N’oge na-adịghị anya gara aga, ezuru enyi m akwụkwọ ndetu nke otu enyi m, wee rue mgbe m zụtara nke ọhụrụ, akwụghachiri m pc nke xp tinyere ya, tinye Ubuntu n’elu ya, ịdị n’otu masịrị m, naanị nsogbu dị na adobe flash, obere igwe O nweghi kaadi vidiyo ma o dighi ejide ya nke oma, nke a ka m chere bu ihe omuma di mfe banyere ihe kpatara otutu PC na Linux, Microsoft na eweputa mmelite mgbe nile nke gha ewelata sistemu ma obu usoro ndi choro otutu ego, dika igwe ịbụ mgbe ochie, Linux na-ebilite dị ka naanị nhọrọ, na mgbakwunye na ọ dị ugbu a dị mfe karị
Ọfọn, dị egwu, taa XP (emelitere) dị mfe karịa Ubuntu (nke kachasị emelitere na Unity na achọghị m iche n'echiche ihe ọ na-abịa (HUD dịka ọmụmaatụ).
Echere m na ọ dabere na igwe ahụ, m kpochara xp ahụ na ccleaner, na mgbakwunye na ịkọwa ya, yana ndozi niile emere (otu ụbọchị na-agọnarị xp, m tụgharịrị na Linux iji ghara ịgafe ihe ndị a ọzọ, Mana agbanyeghị, tupu ọ banye na 10 nkeji, mgbe ọ rụchara ya, ọ na-ebuzi 2). Ubuntu weputara banshee maka clementine, gbrainy na mono dependencies, na na ịdị n'otu 2d ka ukwuu karịa mmiri mmiri, ọ na-ebugharị na 30 sec ma na-erepịakwa 325 mb nke ebule ma ọ bụrụ na ọ ga-eme n'ọdịnihu na ọ ga-ebu oke na akụ, etinye m xubuntu m ga-anọkwa otu oge ọzọ
Laptọọpụ ochie nke ndị nọ na nsogbu
ndị enyi maara ihe dụrụ gị ọdụ
ha na-aga Linux
ọbụna na ọhụrụ igwe na MS Windows OS.
Nke a gbakwunyere mbugharị gọọmentị nke kọmpụta kọmpụta kọmputa ochie na Linux maka otu ihe ahụ.
M na-eji mint12 na Mate, mgbe m jiri chakra ọ na - achọpụta ya, ahụrụ m na - achọpụta ndị ọzọ - etinyego m ọtụtụ desktọọpụ * ubuntu-desktọọpụ ọ bụrụ na ọ dị oke mkpa.
Ikwesiri igbanwe UserAgent
N’uche m, echere m na ọnụọgụ osX na Linux pere mpe maka ihe m hụrụ na gburugburu m. Obi abụọ adịghị ya na ihe ndị ọzọ na-adọta na ọnụ ọgụgụ bụ ụlọ ọrụ ndị na-anọgide na-eji ọtụtụ Windows.
Aga m eme ka ọ dị mfe. Mmadu ole ka ichere iji mac osx na China?
Ekwuola m ya ihe niile xd
Ọfọn, dị ka ebe niile, ndị na-ese ihe nkiri na pringaos anọ na-achọ inwe mmetụta dị jụụ ma dị iche
Ọ bụghị nke a. Amaara m karịa otu onye zụtara Mac, naanị n'ihi na onye ọzọ gwara ya na ọ bụ ihe kachasị mma ... na voila, ọ zụrụ ya.
Ọfọn, nke ahụ bụ pringaos, ọ bụkwa ihe m mere n'oge ya na Mac nke bọọlụ ahụ
Mgbe ọ bụla ụdị data a na-apụta, ọ ga-amasị m ịmara usoro eji eme ihe, ihe nlele ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ edepụtara na atụmatụ ọnụ ọgụgụ ejiri, mana ọ naghị apụta.
Echere m na ọ bụ ihe dị ka nke ahụ
A: ndị ọrụ Linux = 1%
B: ndị ọrụ Linux ndị wụnye ubuntu na ndị enyi ha + ụlọ ọrụ na gọọmentị chọrọ ịchekwa ikikere = 0.41%
A + B = 1.41%…. Na-eto
Google na nkwanye ùgwù ya maka ndị ọrụ
Ubuntu na-anwa ịgbanwe Desktọpụ na HUD